Mampisara-Kevitra an’i Japana Ny Fako Navelan’ny Horohoron-tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2013 14:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Nederlands, 한국어, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Herintaona sy folo volana izay no lasa hatramin'ny nisian'ilay Horohorontany Goavana tao Atsinanan'i Japana tamin'ny 11 Martsa 2011. Eo am-panaovana dingana amin'ny fanorenana ireo faritra voakasiky ny horohoron-tany, izany dia noho ny fanohanana sy fanampiana avy amin'ny Japana rehetra manerantany. Na dia izany aza, mampizara ny firenena ny olana momba ny fandoroana ireo potipoti-javatra izay mitera-doza.
910.000 taonina ireo potipoti-javatra ao amin'ny prefektioran'i Miyagi, ary 430.000 taonina hafa ao amin'ny prefektioran'i Iwate izay mila dorana [ja] avokoa. Korontan-trano rava 370.000 taonina ao amin'ny prefektioran'i Miyagi ary 170.000 taonina ao amin'ny prefektioran'i Iwate no efa nifanarahana fa hodorana any amin'ireo prefektiora 10 hafa, satria be loatra ireo korontan-trano rava ao amin'izy ireo.
Tamin'ny volana Mey 2012, nanaiky handray ireo korontan-trano rava ny tanànan'i Kitakyushu, niezaka nanakana ny fandoroana ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fandadizana tao ambany kamiao [ja] feno potipoti-javatra. Nametraka an-tsarintany ny endrik'ireo antontam-bato amam-biriky (korontan-trano rava) avy amin'ireo faritra voakasiky ny tsunami ny habaka [ja] iray natokana handrakitra vaovao momba ny faneken'ny governemanta ao an-toerana ireo korontan-trano rava mitera-doza.
Mpisera flickr watashiwani nandefa ity fanazavana an-tsary feno ahiahy momba ny fandoroana ireo korontan-trano rava:
Kanefa toa mahatsiaro tsy miraika manoloana ny soritrasa fitsinjarana ireo korontan-trano rava hodorana ny vahoaka ao amin'ireo faritra voakasiky ny horohorontany. Nampiseho ny fankasitrahany ny prefektioran'i Tokyo ny tanànan'i Onagawa ao amin'ny prefektioiran'i Miyagi tamin'ny fanekeny handray ireo korontan-trano rava sy tamin'ny fizarana trondro balaou (trondron-dranomasina) 60.000 maimaipoana tao amin'ny Valan-javaboarin'i Hibiya tamin'ny 20 Oktobra 2012. Tao amin'ny Twitter ity fanehoan-kevitra manaraka ity izay milaza momba ny fizarana ilay trondro balaou maimaipoana tamin'ny alalan'ny tenifahatra #秋刀魚収穫祭 ( fetiben'ny fotoam-pandratoana trondro balaou)
@monchicamera Raha vao nijery ity tenifahatra ity #秋刀魚収獲祭 aho, nahita sary sy fanehoan-kevitry ny olona mankafy ny fetibe ary nahafaly ahy izany.
@leo_orebushi Hevitra tsara izany. –> Antsipirihan'ny fety : Nizara trondro balaou 100.000 ny tanànan'i Onagawa tamin'ny 20 Oktobra mba hisaotra an'i Tokyo tamin'ny fanekeny handray ireo korontan-trano rava mitera-doza raha tsy izany niandry zato taona mihitsy vao hamela izany ao amin'ny tanànany. http://twipla.jp/events/30171
@hosssssyna Nanontany momba ny tahan-taratra amin'ireo trondro tamin'ny fetibe #onagawa aho #秋刀魚収穫祭 ka nijery ny habak'izy ireo ary nahita ity pejy ity. Tsy afaka hanao izany ao amin'ny fetibe aho saingy te-hanohana ireo olona miasa tsara aho –>[amin'ny fandrefesana ny tahan-taratra isaky ny fipetrany] http://onagawa-town.com/sanma/?page_id=40 …
Voatery nandà ny tolotra [ja] amin'ny handraisana ny koronta-trano rava kosa ny tanànan'i Taki, ao amin'ny prefektioran'i Mie, satria nanohitra izany avokoa ny 12 tamin'ireo mpikambana 13 ao amin'ny Filankevitra monisipaly. Mbola eo am-pitadiavana vahaolana momba ny soritrasa fandoroana ny prefektiora, saingy nanolotra soso-kevitra tamin'ny ben'ny tanànan'i Ise ao amin'ny prefektioran'i Mie ny Hahanowa [ja], vondrona renim-pianakaviana tamin'ny 4 Desambra 2012, izay mitaky fanazavana mangarahara momba ny fandoroana ireo korontan-trano rava ary mitaky mba tsy handray intsony izany korontan-trano rava izany.
Tao amin'ny bilaogin'ny Hahanowa [ja], renim-pianakaviana manan-janaka herintaona nanoratra momba ny ahiahiny mikasika ny soritrasa fandoroana ireo korontan-trano rava midadasika hozaraina:
Tetikasa Kyushu Himawari, vondrona nianatra ny olana momba ny fandoroana amin'ny faritra midadasika niantso ny amin'ny tokony hanaovana hetsika [ja] toy ny fandefasana taratasy, , fax na mailaka mitaky ny governoran'i Murai ao amin'ny prefectioran'i Miyagi mba hampitsahatra ny fitaterana ireo korontan-trano rava any amin'ireo prefektiora hafa.
Noho ny fahamaroan'ny sonia voaangona hampitsaharana ny fako hiditra ao an-tanànan'i Kitakyushu tao amin'ny antenimieran'i Miyagi dia niresaka momba ny fisarasarahan-kevitra tsy mitsahatra ao aminy vokatr'ireo zava-natao ny kaonty Twitter-n'ny gazety Asahi Shimbun avy amin'ny sampan'i Sendai.
Araka ny antonta-kevitry ny Sampan-draharaham-panjakana Japoney misahana ny fananganana indray ny fanorenana [ja] nivoaka tamin'ny 27 Novambra 2012, amin'ny totalin'ny fako navelan'ny voina mahatratra 18.020.000 taonina, ny 27 isan-jato ihany no afaka. Ny tanjon'ny Sampan-draharahan'ny Fananganana indray dia ny hahavita ny fanafoanana tanteraka ny fako navelan'ny voina mialoha ny faran'ny taona Marsa 2014.